संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदुत निक्की हेलीद्वारा राजीनामा
२o७५ असोज २३ मंगलबार
काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदुत निक्की हेलीले राजीनामा दिएकी छन्। बिबिसीका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हेलीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छन्।
साउथ कोरोलिनाकी पुर्व गभर्नर हेलीले आश्चर्यजनकरुपमा राजदुत पदबाट राजीनामा दिएको अमेरिकी मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । सन् २०१७ जनवरीदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको राजदुतको रुपमा कार्यरत हेली अमेरिकी अडानलाई स्पष्ट रुपमा राख्ने राजदुतको रुपमा चिनिन्छिन्।
२०१२ मा राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला राष्ट्रपति पदका रिपब्लिकन उम्मेदवार मिट रोमनीले हेलीलाई सम्भावित उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने भने पनि उनले सो अफर अस्विकार गरेकी थिइन्। हेली टाइम म्यागेजिनको सन् २०१६ को विश्वका सय प्रभावशाली व्यक्तिको सुचिमा समेत परेकी थिइन्।
पछिल्लो समय राष्ट्रपति ट्रम्पसँग हेलीको नीतिगत भिन्नता रहेको थियो। रसिया प्रकरणमा हेलीले अपरिपक्क नीति अपनाइएको राष्ट्रपति ट्रम्पले आरोप समेत लगाएका थिए। अमेरिकी मिडियाले सन् २०२० मा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन राजदुतबाट राजीनामा गरेको अनुमान गरेका छन्।
प्रतिलिपि अधिकार हनन गरेको भन्दै वार्नर ब्रोजले ट्विटरबाट हटायो डोनाल्ड ट्रम्पको भिडियो
काठमाडौं । ट्विटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्विटमा प्रयोग गरेको ‘द डार्क नाइट राइजेज’ चलचित्रको सङ्गीत प्रयोग गरेको भिडियो हटाएको छ । वार्नर ब्रोज स्टुडियोजले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चलचित्रको सङ्गीत अनाधिकृत
प्रधानमन्त्री ओली र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको भेट !
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्दै। साथमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य र अमेरिकी प्रथम महिला मलेनिया ट्रम्प। तस्बिर : संयुक्त
मलाई सहयोग गर्ने महान्यायाधीवक्ता नै भएनन्- डोनाल्ड ट्रम्प
वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महान्यायाधीवक्ता जेफ सेसनबिरुद्ध फेरि आक्रोस पोकेका छन् । उनले भने, “मलाई सहयोग गर्ने महान्यायाधीवक्ता नै छैनन् ।” हील टेलिभिजनलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू जेसनको
डोनाल्ड ट्रम्पलाई भगवान् मानेर पूजा ! तस्बिरमा दूधको अभिषेक पनि !
हैदरावाद (भारत) । एक भारतीयले वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पूजा गर्ने गरेको समाचार बाहिर आएको छ । उनले आफ्नो पूजाघरमा ट्रम्पको तस्बिर नै राखेर पूजा गर्ने गरेका छन् । हरेक बिहान